ဘာစီလိုနာ ၊ ယူနိုက်တက် တို့ကို ကျော်ပြီး ဒီလစ်ဟာ ဂျူဗီကို ဘာ့ကြောင့် ရွေးချယ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ပြောကြား သွားတဲ့ #မဲလ်ချော့တ် - SPORTS MYANMAR
ဘာစီလိုနာ ၊ ယူနိုက်တက် တို့ကို ကျော်ပြီး ဒီလစ်ဟာ ဂျူဗီကို ဘာ့ကြောင့် ရွေးချယ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ပြောကြား သွားတဲ့ #မဲလ်ချော့တ်
နယ်သာလန် လက်ရွေးစင် နောက်ခံလူ ဒီလစ် ဟာ ပြီး ခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တုန်းက အေဂျက် အသင်း နဲ့ အတူ ပြည်တွင်း ဖလား ပြိုင်ပွဲ တွေမှာ သာမက ချန်ပီယံ လိဂ် ဖလား ပြိုင်ပွဲ တွေမှာ ပါ အထူး ခြေစွမ်း ကောင်း ပြသ ထားနိုင် ခဲ့တာ ကြောင့် ဒီနွေ အပြောင်း အရွှေ့ ဈေးကွက် မှာ သတင်း တွေ ကြီးခဲ့ ပါတယ် ။
သူ့ကို ခေါ်ယူ နိုင်ဖို့ အတွက် ဥရောပ ထိပ်သီး ကလပ် အတော် များများ က စောင့်ကြည့် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် သူ့ကို ခေါ်ယူ နိုင်ဖို့ အတွက် စပိန် ထိပ်သီး ဘာစီလိုနာ အသင်း နဲ့ ခံစစ် ပိုင်းကို အင်အား ဖြည့်တင်း လိုနေ ခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း တို့က ထိပ်ဆုံး မှ ရေပန်းစား ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အဆုံးသတ် မှာတော့ သူ့ကို ခေါ်ယူ လိုတဲ့ အသင်း စာရင်း ထဲ အီတလီ ထိပ်သီး ဂျူဗင်တပ် အသင်း လည်း ဆက်တိုက် ဆိုသလို ပါဝင် လာခဲ့ ပြီး နယ်သာလန် လက်ရွေးစင် ကို ဥရောပ ပြိုင်ဖက် တွေထက် လက်ဦး ကာ အရ ခေါ်ယူ သွားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
အခုတော့ နယ်သာလန် လက်ရွေးစင် ကစားသမား ဟောင်း တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ မာရီယို မဲလ်ချော့တ် က ဒီလစ် ဟာ စီးရီးအေ ချန်ပီယံ အသင်း ဆီ ပြောင်းရွှေ့ သွားခဲ့ ခြင်းက မှန်ကန် ကြောင်း ၊ ဂျူဗင်တပ် ရဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် ဖလား ဆွတ်ခူး လိုရေး စီမံကိန်း က သူ့ကို အိုးလ် လေဒီ တို့ဆီ ပြောင်းရွှေ့ ဖို့ စိတ်ဓါတ် တက်ကြွ မှုတွေ ဖြစ်စေ ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် အီတလီ မြေမှာ ခံစစ် ကစားသမား ကောင်း တွေဟာ အထူး လေးစား မှုတွေ ခံရ လေ့ ရှိခြင်း ကလည်း ဒီလစ် ကို ဂျူဗင်တပ် ဆီ ဦးစားပေး ပြောင်းရွှေ့ ဖို့ တွန်းအား တွေ ဖြစ်စေ နိုင်ခဲ့ ကြောင်း မဲလ်ချော့တ် က ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” အီတလီ ဘောလုံး လောက က ခံစစ် ကစားသမား တွေကို ခေါ်ယူ ဖို့ စိတ်အား ထက်သန် လေ့ ရှိကြ ပါတယ် ။ သူတို့ တွေက အီတလီ မှာ ခံစစ် ကစားသမား တွေ အပေါ် လေးစား သမှု ထားရှိ ကြတယ် လေ ။ အီတလီ အသင်း တွေက ခံစစ် နဲ့ ပတ်သက် လို့ အရင် အတိုင်း ရှိနေ ကြဆဲ ပါပဲ ”
” ဥရောပ ထိပ်တန်း ကစားသမား တွေလည်း အဲ့ဒီ ကို ပြောင်းရွှေ့ ကစားလို ကြတယ် လေ ။ ကျွန်တော့် အတွက် ကတော့ ဒီနှစ် မှာ ဂျူဗင်တပ် ဟာ ချန်ပီယံ လိဂ် ဖလား ဆွတ်ခူး နိုင်ဖို့ အတွက် အထူး ရေပန်းစား နေတဲ့ အသင်း တစ်သင်း ပါပဲ ”
” တစ်ကယ်တမ်း မှာတော့ ဆု ဖလား ကို 8 ကြိမ် အထိ ဆက်တိုက် ရယူ ဆွတ်ခူး နိုင်ဖို့ ဆိုတာ လွယ်ကူ လှတဲ့ အရာ တော့ မဟုတ် ပါဘူး ။ ဒီလစ် ဟာ အခု စတား တွေ စုစည်း နေ ကြတဲ့ အသင်း ကို ရောက်ရှိ နေ ပါပြီ ။ သူဟာ အရင် တုန်းက ကစား နေခဲ့ တဲ့ ပုံစံ တွေ အတိုင်း ပဲ ဘောလုံး ကို အံဝင် စွာ ဆက်လက် ကစား နေရ ပါတယ် ”
” သူ အရင် ကတည်းက အဲ့ဒီလို ပုံစံ နဲ့ ကစား နေ ခဲ့တဲ့ ကစား သမား တစ်ဦး ပဲလေ ။ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် လား ? အဲ့တာ က အခု ထက်ထိ အထိုင် မကျ သေးတဲ့ အသင်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်ပါ လိမ့်မယ် ။ သူတို့ တွေက အသင်း ကို ပြန်လည် တည် ဆောက် နေ ကြတုန်း ပဲလေ ”
” ဘာစီလိုနာ လား ? သူတို့ တွေ ဟာလည်း အပြောင်း အလဲ အချို့ ကို ပြုလုပ် နေကြ ပါတယ် ။ သူတို့ အတွက် တော့ ချန်ပီယံ လိဂ် ဖိုင်နယ် ဆီ မတက်ရောက် နိုင်ခဲ့ ခြင်းက အောင်မြင် မှု မရ ယူ နိုင်ခဲ့ခြင်း လို ခံစား နေရ ပုံ ပါပဲ ”
” လက်ရှိ အနေအထား အရ တော့ ဂျူဗင်တပ် အသင်း က ချန်ပီယံ လိဂ် ဖလား ဆွတ်ခူး နိုင်ဖို့ အတွက် အနီးစပ်ဆုံး အသင်း တစ်သင်း အဖြစ် ရှိနေ ပါတယ် ။ သူတို့ တွေဟာ ဒီ ရာသီ မှာ ဖလား ရယူ နိုင်ဖို့ အနီးစပ် ဆုံး အခွင့် အရေး ကောင်းတွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားကြ တယ်လေ ။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလစ် က ဂျူဗီ ကို ရွေးချယ် ခဲ့တာ ပါ ” လို့ မဲလ်ချော့တ် က ဆိုသွား ခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ၊ ယူနိုကျတကျ တို့ကို ကြျောပွီး ဒီလဈဟာ ဂြူဗီကို ဘာ့ကွောငျ့ ရှေးခယျြခဲ့သလဲ ဆိုတာ ပွောကွား သှားတဲ့ #မဲလျခြော့တျ
နယျသာလနျ လကျရှေးစငျ နောကျခံလူ ဒီလဈ ဟာ ပွီး ခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တုနျးက အဂေကျြ အသငျး နဲ့ အတူ ပွညျတှငျး ဖလား ပွိုငျပှဲ တှမှော သာမက ခနျြပီယံ လိဂျ ဖလား ပွိုငျပှဲ တှမှော ပါ အထူး ခွစှေမျး ကောငျး ပွသ ထားနိုငျ ခဲ့တာ ကွောငျ့ ဒီနှေ အပွောငျး အရှေ့ စြေးကှကျ မှာ သတငျး တှေ ကွီးခဲ့ ပါတယျ ။
သူ့ကို ချေါယူ နိုငျဖို့ အတှကျ ဥရောပ ထိပျသီး ကလပျ အတျော မြားမြား က စောငျ့ကွညျ့ ခဲ့ကွ ပါတယျ ။ အထူးသဖွငျ့ သူ့ကို ချေါယူ နိုငျဖို့ အတှကျ စပိနျ ထိပျသီး ဘာစီလိုနာ အသငျး နဲ့ ခံစဈ ပိုငျးကို အငျအား ဖွညျ့တငျး လိုနေ ခဲ့တဲ့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး တို့က ထိပျဆုံး မှ ရပေနျးစား ခဲ့ကွ ပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ အဆုံးသတျ မှာတော့ သူ့ကို ချေါယူ လိုတဲ့ အသငျး စာရငျး ထဲ အီတလီ ထိပျသီး ဂြူဗငျတပျ အသငျး လညျး ဆကျတိုကျ ဆိုသလို ပါဝငျ လာခဲ့ ပွီး နယျသာလနျ လကျရှေးစငျ ကို ဥရောပ ပွိုငျဖကျ တှထေကျ လကျဦး ကာ အရ ချေါယူ သှားနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။
အခုတော့ နယျသာလနျ လကျရှေးစငျ ကစားသမား ဟောငျး တဈဦး ဖွဈတဲ့ မာရီယို မဲလျခြော့တျ က ဒီလဈ ဟာ စီးရီးအေ ခနျြပီယံ အသငျး ဆီ ပွောငျးရှေ့ သှားခဲ့ ခွငျးက မှနျကနျ ကွောငျး ၊ ဂြူဗငျတပျ ရဲ့ ခနျြပီယံ လိဂျ ဖလား ဆှတျခူး လိုရေး စီမံကိနျး က သူ့ကို အိုးလျ လဒေီ တို့ဆီ ပွောငျးရှေ့ ဖို့ စိတျဓါတျ တကျကွှ မှုတှေ ဖွဈစေ ခဲ့ကွောငျး ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါ့အပွငျ အီတလီ မွမှော ခံစဈ ကစားသမား ကောငျး တှဟော အထူး လေးစား မှုတှေ ခံရ လေ့ ရှိခွငျး ကလညျး ဒီလဈ ကို ဂြူဗငျတပျ ဆီ ဦးစားပေး ပွောငျးရှေ့ ဖို့ တှနျးအား တှေ ဖွဈစေ နိုငျခဲ့ ကွောငျး မဲလျခြော့တျ က ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
” အီတလီ ဘောလုံး လောက က ခံစဈ ကစားသမား တှကေို ချေါယူ ဖို့ စိတျအား ထကျသနျ လေ့ ရှိကွ ပါတယျ ။ သူတို့ တှကေ အီတလီ မှာ ခံစဈ ကစားသမား တှေ အပျေါ လေးစား သမှု ထားရှိ ကွတယျ လေ ။ အီတလီ အသငျး တှကေ ခံစဈ နဲ့ ပတျသကျ လို့ အရငျ အတိုငျး ရှိနေ ကွဆဲ ပါပဲ ”
” ဥရောပ ထိပျတနျး ကစားသမား တှလေညျး အဲ့ဒီ ကို ပွောငျးရှေ့ ကစားလို ကွတယျ လေ ။ ကြှနျတေျာ့ အတှကျ ကတော့ ဒီနှဈ မှာ ဂြူဗငျတပျ ဟာ ခနျြပီယံ လိဂျ ဖလား ဆှတျခူး နိုငျဖို့ အတှကျ အထူး ရပေနျးစား နတေဲ့ အသငျး တဈသငျး ပါပဲ ”
” တဈကယျတမျး မှာတော့ ဆု ဖလား ကို 8 ကွိမျ အထိ ဆကျတိုကျ ရယူ ဆှတျခူး နိုငျဖို့ ဆိုတာ လှယျကူ လှတဲ့ အရာ တော့ မဟုတျ ပါဘူး ။ ဒီလဈ ဟာ အခု စတား တှေ စုစညျး နေ ကွတဲ့ အသငျး ကို ရောကျရှိ နေ ပါပွီ ။ သူဟာ အရငျ တုနျးက ကစား နခေဲ့ တဲ့ ပုံစံ တှေ အတိုငျး ပဲ ဘောလုံး ကို အံဝငျ စှာ ဆကျလကျ ကစား နရေ ပါတယျ ”
” သူ အရငျ ကတညျးက အဲ့ဒီလို ပုံစံ နဲ့ ကစား နေ ခဲ့တဲ့ ကစား သမား တဈဦး ပဲလေ ။ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ လား ? အဲ့တာ က အခု ထကျထိ အထိုငျ မကြ သေးတဲ့ အသငျး ဖွဈကောငျး ဖွဈပါ လိမျ့မယျ ။ သူတို့ တှကေ အသငျး ကို ပွနျလညျ တညျ ဆောကျ နေ ကွတုနျး ပဲလေ ”
” ဘာစီလိုနာ လား ? သူတို့ တှေ ဟာလညျး အပွောငျး အလဲ အခြို့ ကို ပွုလုပျ နကွေ ပါတယျ ။ သူတို့ အတှကျ တော့ ခနျြပီယံ လိဂျ ဖိုငျနယျ ဆီ မတကျရောကျ နိုငျခဲ့ ခွငျးက အောငျမွငျ မှု မရ ယူ နိုငျခဲ့ခွငျး လို ခံစား နရေ ပုံ ပါပဲ ”
” လကျရှိ အနအေထား အရ တော့ ဂြူဗငျတပျ အသငျး က ခနျြပီယံ လိဂျ ဖလား ဆှတျခူး နိုငျဖို့ အတှကျ အနီးစပျဆုံး အသငျး တဈသငျး အဖွဈ ရှိနေ ပါတယျ ။ သူတို့ တှဟော ဒီ ရာသီ မှာ ဖလား ရယူ နိုငျဖို့ အနီးစပျ ဆုံး အခှငျ့ အရေး ကောငျးတှေ ကို ပိုငျဆိုငျ ထားကွ တယျလေ ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဒီလဈ က ဂြူဗီ ကို ရှေးခယျြ ခဲ့တာ ပါ ” လို့ မဲလျခြော့တျ က ဆိုသှား ခဲ့လိုကျ ပါတယျ ။